ဗမာနိုင်ငံသစ် တည်ဆောက် စို.လား( ၂ )
ပင်လုံစာချုပ်ဟာ စည်းလုံးရေးအတွက် ရည်ရွယ်တာတော့မှန်တယ် ၊ တချို.က ခွဲရေးလို. ပုံသေယူဆနေ တယ် ။ ဒါဟာ သူတိုစိတ်ထဲရှိတဲ့ စိတ်ရင်းကို ဖေါ်ြ့ပနေတာဘဲ ။ အခုထိလဲ ဒီရည်ရွယ်ချက်ဘဲရှိနေကြတယ်။ နိုင်ငံကို တခုတည်းသော နိုင်ငံတော် အဖြစ် တည်ဆောက်ဘို.ကြိုးပန်းတဲ့ ခေါင်း
ဆောင်မှန်သမျှဟာအတိတ် ကရော ပစ္စုပန်မှာ တရားခံဖြစ်ကြရတယ် ။
ပြည်ထောင်စုကို တနည်းမဟုတ်တနည်း မခွဲရသမျှ မကျေနပ်သူတွေက လာပြန်ပြီ Federal တဲ့၊ ဒီကနေ. အထိလဲ စကားလုံးအပြောင်းအလဲ သုံးပြီး ခွဲဘို.ဘဲ ပြောနေတယ် ။ Federal ပြီးရင် ဘယ်သွားမှာလဲ ။ ဒါ စိုးရိမ်မှူ သက်သက်မဟုတ်ဘူး အကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့သာဓက အရ ပြောနေတာ။
လောကမှာ မဖြစ်နိုင် တာမရှိ မဖြစ်သေးတာသာရှိတယ် ဆိုတဲ့ စကားပေါ်မှာ မီပြီး ခွဲရေးကိုစဉ်းစားကြမယ်ဆိုရင် အကောင်းအဆိုး အကျိုးဆက်တွေကိုပါ ထည့်ပြီး စဉ်းစားကြရမယ် ၊
စိတ်ကူးယဉ်တယ် ဆိုတာ လူတိုင်း ယဉ်နိုင်တယ် ၊ လ ကမ္ဘာအပါအ၀င် စင်္ကြာဝဋာ ကို ခရီးလှည့်ကြတာလဲ စိတ်ကူးယဉ်တာက စခဲ့တာဘဲ ။ လေထဲမှာတိုက်
အိမ်ဆောက်ကြတယ် ဆိုတာတွေလဲ ရှိတယ် ။ ကြွက်သေတခု အရင်းပြုဆိုပြီး
လဲ ရှိတယ် ။
ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိသူတွေက ငြိမ်းချမ်းရေး ရဘို.အတွက်စိတ်ကူးယဉ်တယ်၊ တမ်းတတယ် ၊ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ ကလဲ ငြီးငွေ. လိ.ုထင်ပါရဲ့ စစ် ဖြစ်ဘို.စိတ်ကူးယဉ်တယ် ။ Action men တွေက Action ပါမှ ပျော်တယ်၊ လူအမျိုးမျိုးဟာ စိတ်ကူး အမျိုးမျိုးရှိကြတာ သဘာဝဘဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိဘူး. ငြိမ်းချမ်း မယ်လို. ထင်တဲ့ စိတ် ကူးတွေ ကတော့ တပုံကြီးဘဲ၊ ရင်ကြားစေ့ရေး ၊ ညီညွတ်ရေးတွေ လူတိုင်း ပြောနေတဲ့ စကား
တွေပေါ်မှာ ၊ အကြမ်းအားဖြင့် စိတ်ကူးယဉ် ကြည်.လိုက်တော့ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်း
ပုံအခြေခံ ဥပဒေ ကို လုံးဝ ဖျက်သိမ်းရမယ် ၊ ဖေါ်ပြထားသည့် ရှမ်း ချင်း ကချင် ကရင် ကယား ရခိုင် မွန် လူမျိုးစု ပြည်နယ်များ အာလုံးကို လုံးဝ လွတ်လပ်သောအချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများအဖြစ် တည်ထောင်ရမယ် ဆိုတာဘဲ ပေါ်လာတယ် ။
လက်ရှိ တိုင်းဒေသကြီးများကိုစုပေါင်းပြီး လွတ်လပ်၍ အချုပ်အခြာအာဏာ
ပိုင် ဗမာနိုင်ငံ အဖြစ် တည် ထောင်ရမယ်။ ယင်း ပြည်နယ် တိုင်းဒေသတွင် မှီတင်း နေထိုင်ကြသော လုမျိုးစုဝင်တိုင်းရင်းသားများကို မိမိတို. လူမျိုးစုဝင်
များ၏ သီးခြားတိုင်းပြည်များတွင် သွားရောက်နေထိုင်အခြေချ စေရမယ် ။
တပ်မတော်အပါအ၀င် လက်နက်ကိုင်တပ်များတွင် အမှုထမ်းလျှက်ရှိသည့်
တိုင်းရင်းသား လုမျိုးစုဝင် အသီး သီးတို.ကို ၄င်းတို၏ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစ
ုနိုင်ငံ လက်နက်ကိုင်တပ်များမှာ သာ အမှုထမ်းစေရမယ် ၊ မြန်မာ့ တပ်မတော်
ကို ဖျက်သိမ်း၍ ဗမာလူမျိုးစုဝင်များသာ ပါဝင်သည့် ဗမာ့တပ်မတော် စစ်စစ် တခု အမြန်ဖွဲစည်း ရမည် ။
လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများသည် မိမိတို့ကြမ္မာ မိမိတိုဖန်တည်းရေးအတွက် ၊တပ်မတော်အသီးသီး တို.သည် မိမိတို လိုလားသည့် မိမိတို.အားထောက်ခံသည့် မည်သည့် နိုင်ငံကြီး မဆိုတို.၏ ညုနှင့် ဓါတု ပိုးမွှား အပါအ၀င် လက်နက် ခဲယမ်းများ စစ်ရေးအထောက် အပံ့တိုကို မဆို ရယူခွင့်ရှိသည်။ စစ်အခြေခံ စခန်း များ လက်ခံ တည်ဆောက် ခွင့်ပြုနိုင်
သည် စသဖြင့်တို.ပေါ့လေ ။
ဒီအစီအစဉ်မှာ လူထုဆန္ဒ ခံယူစရာ လိုမယ် မထင်ဘူး ၊ လက်ရှိ နိုင်ငံမှာ ဗမာလူမျိုးစုဝင်ဦးရေ များနေတဲ့ အတွက် လူထုဆန္ဒခံယူမှုဟာ အခြားလူမျိုးစုဝင် တွေအပေါ် တရားမျှတလိမ့်မယ်လို.ဘယ်လိုမှ မြင်ကြ မယ်မဟုတ်ဘူး။ နဂိုကမှ ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလို. ပြောနေကြတာ ဗမာတွေက ဘယ်သူ ကို ဘာတွေ လုပ်လို. လဲ မသိဘူး။
လွတ်လပ်ရေးကြိုးပန်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ လူမျိုးစုဝင် အားလုံးပါကြ
တယ် ၊ သူတိုရဲ စည်းရုံးမှုကြောင့် လွတ်လပ်ရေး မပေးမနေရတောတဲ့ အခြေ
စိုက်သွားတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ ဟာ ပင်လုံ ဆိုတဲ့ သတ်နဲ. ရိုက်လိုက် တာ အားလုံးကို အရှင် လတ်လတ် တံကျင်သျှိုလိုက်သလို ဘဲ ၊ မသေမရှင် အခံရခက်ဖြစ်နေ ကြတယ် ၊ အင်္ဂလိပ်ကို မနိုင်တော့ ကိုယ့်အချင်းချင်း ထသတ်နေကြတယ် ။
ဒါကြောင့်လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၆ နှစ်ကာလ အတွင်းမှာ တခြား လူမျိုးစုဝင်တွေကလက်နက် စွဲကိုင်ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော်ကို ဗမာအစိုးရ နဲ့ ဗမာ ဗုဒ္ဒဘာသာ တပ်မတော် ဆိုပြီး ရင့်သီးတဲ့အစွဲ ခါးသီးတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ဆန်.ကျင်တိုက်ခိုက် နေကြတာဘဲ ။
တကယ်တော့ ဗမာ မုန်တီးရေး ဗမာဆန်.ကျင်ရေး စစ်ပွဲသာ ဖြစ်တယ် ၊ သူပုန်တွေရဲ့ အများစုဟာ ခရစ်ယန်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်
အောင်ထင်ရှားတယ် ၊ ဗူဒ္ဒဘာသာကို ရန်ရှာ တိုက် ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုလဲ သူတိုစကားအရဘဲ တွေ.ရတယ် ။ အရှေ.တောင်အာရှဒေသမှာ ခရစ်ယန် တွေဟာပါးစပ်က ဘာမှ ပြောမနေဘဲ ဗူဓ္ဒဘာသာတွေကို အသေသတ်ခဲ့တာ
ဘဲ ဂျပန် ၊ ကိုရိးယား ဗီယက်နမ် ကမ္ဘောဒီးယား လော နိုင်ငံတွေက သက်သေ
ခံလိမ့်မယ် ။ ယိုးဒယား( ထိုင်း) သာလွတ်ခဲ့တယ် ။
အခုဆိုရင် ရခိုင်ဘက်က မွတ်စလင် လက်နက်ကိုင် သူပုန်တွေက မွတ်စလင် နိုင်ငံတော် ထူထောင်ကြ ပြန်ရင် တမှောက်။့ ခရစ်ယန် မွတ်စလင်တိုရဲ့ ခရုစိတ် ဘာသာရေးစစ်ပွဲဟာ ဒို.ဆီကိုတောင် အနာဂါတ်မှာ ရောက်လာစရာ
အဲ ဒီတော့ ဘာလုပ်ကြမလဲ. ၀ိုင်းပြီး စဉ်းစာအကြံပေးကြဘို. လိုနေပြီ စိတ
်ဝင်စားရင် ပေါ့လေ၊ ဒိုတတွေလဲ Carter Centre လောက်တော မညံ့ပါဘူး
ဆိုတာကို ပြ ဘို. လိုတယ် ။ ဒိုပြည် ဒို.မြေကို ဒို.ကလွဲရင် ဘယ်သူက ပိုချစ်မှာလဲ ၊ ဘယ်သူက မေတ္တာ ထားမှာလဲ ?
ကဲ စဉ်းစားလိုက်ကြအုန်း ။